Ii-FAQs - Shandong Kingoro Machinery Co., Ltd.
Ingakude kangakanani inkonzo yomatshini wepelethi yakho?
A: Asinakukunika ixesha elichanekileyo, kodwa oomatshini abathile beepelethi bathengiswa ngo-2013 basasebenza kakuhle ngoku.
Lixesha elingakanani leenkonzo zokunxiba?
A: Khalisa kufa: iiyure eziyi-800-1000.I-roller: iiyure eziyi-800-1000. Iqokobhe mqengqeleki: iiyure 400-500.
Isangqa sokufa sinamacandelo amabini, xa omnye umaleko uphelile, yiguqule usebenzise omnye umaleko.
Kukuphi okungcono ngokubhekisele kuthotho lwe-SZLH560 kunye ne-SZLH580?
A: Zombini umgangatho uqinisekisiwe. Abanye abathengi bakhetha olu hlobo, kwaye abanye abathengi bathanda olunye uhlobo.
Unokuyikhetha ngokwemeko yakho.
Ukuba kuthathelwa ingqalelo indleko, uthotho lwe-SZLH560 luyonga, kodwa i-SZLH580 inokusebenza okuzinzileyo, kunye nobomi obude kunye nokubiza kakhulu.
Ngaba kukho nayiphi na imfuneko kwizinto zokwenza i-pellet?
A: Ewe. I-Wood sawdsut yeyona nto isetyenziswa kakhulu ekwenzeni i-biomass pellet. Ukuba enye inkunkuma enkulu yomthi inkulu okanye inkunkuma yezolimo, kufuneka ityunyuzwe ibe ngamaqhekeza amancinci kakhulu, ngaphantsi kwe-7mm Kwaye ukufuma yi-10-15%
Zeziphi iingxaki eziqhelekileyo xa usebenzisa umatshini we-pellet?
A: Yahluke kakhulu. Kodwa ungakhathazeki ngayo, sinenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa. Unokufumana ingxelo ngaphakathi kweeyure ezi-2 nge-imeyile, ngefowuni, ngesikhokelo sevidiyo, okanye kwinjineli yenkonzo yaphesheya ukuba iyimfuneko.
Ixesha elingakanani isiqinisekiso esemgangathweni?
A: Bonke oomatshini banewaranti yonyaka omnye, kodwa kungabandakanyi izinto ezincedisayo.
Nokuba ndinganakho kodwa umatshini we-pellet kuphela, akukho zixhobo zixhasayo?
A: Ukuba umatshini wepelethi omncinci kakhulu, ewe, kunjalo, kuphela ngumatshini wepeleth ulungile.
Kodwa kwimveliso enkulu yemveliso, sicebisa ukuba uthenge izixhobo zeyunithi xa zizonke ukuze uqinisekise ukusebenza komatshini
Njani na ibattery kunye ndawonye iringi bafe?
A: Xa iinjineli zethu zikufakela umatshini, ziya kuqeqesha abasebenzi bakho kwindawo. Ukuba awuyidingi inkonzo yethu yokufaka, ungathumela nomsebenzi wakho kumzi-mveliso wethu kuloliwe, sineevidiyo ezicacileyo kunye nencwadana yomsebenzisi ukukunceda uyenze.
Loluphi uhlobo lweoyile yokuthambisa esetyenziswa kumatshini wepelethi?
A: L-CKC220 yebhokisi yebhokisi, kunye neqondo eliphezulu lokushisa i-lithium base grease kwimpompo yegrisi.
Ngaba kukho izinto ezithile ezibalulekileyo ekufuneka zihlawulwe ngakumbi ngexesha lokuqala lokusebenzisa umatshini omtsha?
A: Ungajonga lonke ulwazi olusencwadini yomsebenzisi.
Nceda uqaphele, Okokuqala, kumatshini omtsha, akukho ioyile kuyo, kwaye kuya kufuneka wongeze ioyile efunekayo kunye negrisi yokumpompa okulandela incwadana;
Okwesibini, nceda ukhumbule ukugaya i-die ye-pellet machine ngalo lonke ixesha ngaphambi- nasemva kokuyisebenzisa.
Ukusila Machine For Wood, Isityumzi somthi, IBelt eqhutywa ngeHammer Mill, I-Hammer Mill enenkanyamba, Ukutya kwezilwanyana iPellet Mill, I-Garden Wood Chippers,